वि.सं.२०७७ साल कार्तिक १४ गते । शुक्रबारको राशिफल – Dainik Sangalo
वि.सं.२०७७ साल कार्तिक १४ गते । शुक्रबारको राशिफल
October 30, 2020 251
बिदेशमा सञ्चालित निकाए तथा सस्थाहरुमा काम पाउने तथा पदोन्नती हुँने प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । लामो दुरिको उपलब्धिमुलक मनोरञ्जनात्मक तथा व्यावसायिक यात्रा हुनेछ । बिदेशमा बसेर समय तथा रुपैया पैसा लगानि गर्नेहरुले प्रशस्त आम्दानि गर्ने योग रहेकोछ । आफ्ना साथिभाई तथा अग्रजका सहि सुझाबले एक दुई कदम अगाडि बढि प्रगति पथमा लम्कन सकिनेछ ।
पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजा हात लाग्नेछ भने नया ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जाने तथा दाम्पत्य सुखले मन प्रफुलित हुनेछ । सानो लगानिबाट भनेजस्तो प्रतिफल प्राप्त हुदा आर्थिक अवस्था सुदृड हुनेछ । पुराना कामहरु फत्ते हुने तथा नया काम आउने हुदा दैनिक व्यास्त जस्तै रहनेछ । साझपख यात्रा गर्दा ध्यान दिनहोला ।
भौतिक सम्पति तथा सवारि साधनको प्र्रयोग तथा परिचालन गर्दा ध्यान दिनुहोला नराम्रा घट्नाहरु घट्न सक्छ । व्यापारमा समय दिए अनुशार प्रतिफल प्राप्त नहुँदा आम्दानिको तुलनामा खर्च बढ्नेछ । अध्ययनमा मन नजादा अरु भन्दा पछि परिनेछ भने खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा केहि समय खर्चिय राम्रा तथा उपलब्धिमुलक कामहरु बन्नेछन् । साझपख समय राम्रो रहेकोले धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ ।
घरपरिवार तथा आफन्त सँग छुट्टिएर यात्राको तय गर्नुपर्दा मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । आत्मिय मित्र तथा आमासँग छुट्टिएर टाडाको यात्रा गर्नुपर्दा नरामाईलो महशुस हुनेछ । ज्यानको ख्याल गर्नुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले अध्ययनमा मन जानेछ । उपाहार प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
Prevहङकङ जागिर छोडेर सासुआमा स्याहार्ने दयालु बुहारी कमला थोप्रा
Nextपैसा लु, ट्नका लागि बैंकको एटिएम फो, ड्दै गर्दा एक जना प, क्राउ
नुवाकोटबाट ह, राएका तिमिल्सिना मृ’तावस्थामा भेट्टिए
३ सन्तानको वि’भत्स ह त्या गरेकी चन्द्रा, बुटवलकी खुलेको छ , ह-त्या गर्नु कारण यस्तो !
वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा होप इन्टरनेसनल म्यानपावरमा छापा, कागजात नियन्त्रणमा लिइयो
बैतडीमा कलेज हिँडेकी किशोरीको शव जंगलमा यस्तो अवस्थामा भेटियो, कसरी भयो उनको मृत्यु? (126192)
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (73587)
जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोला ! (68884)
बल्ल प्रहरीले २४ घन्टामै भागरती ह#त्या,रा​ प’त्ता लगायो।गाउकै मान्छे रहेछ (63987)
हेर्नुस्, नेपाली सेनाको यस्तो क:’ठोर….. ; जुन भिडियो अहिले संसारभरी भाइरल भइरहेको छ (भिडियो हेर्नुस) (54744)
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (49808)
समाचार युवा नेता रामकुमारी झाक्री घा’इ’ते युवाहरु आ’क्रो’शित ( हेर्नुहोस् भिडियो ) (43592)
भर्खरै हेर्नुस भा’गीरथीको ह,त्यारा लाई यस्तो अवस्थामा प्रह’री द्वारा के गरियो, भिडियो सहित (43458)
खुसिको खबर – सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै बढ्यो वृद्धभत्ता !!! (41714)